१४.४० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको जनता बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १४.४० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको जनता बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
१४.४० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको जनता बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
जनता बैङ्क नेपालले चालू आव २०७४÷७५ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. ६ करोड ४८ लाख नाफा कमाएको छ । सोही अवधिमा बैङ्कको चुक्तापूँजी २ सय ३९ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख र रिजर्भ कोषको रकम १ सय ७७ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । बैङ्कले पहिलो त्रैमासमा रू. ५ करोड ८३ लाख खराब कर्जा उठाउको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. ४ करोड ३९ लाख ३० हजार आम्दानी गरेको छ । साथै बैङ्कले पूँजी वृद्धिका लागि १४ दशमलव ४० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैङ्कको मङ्सिर १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बर्गिकरण : कर्मशियल बैङ्क
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. २४९
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ६००
५२ हप्ताको न्युन व्यापार मूल्यः रू. २२४
१८० दिनको औषत व्यापार मूल्यः रू. २६१.९६
अध्यक्ष : केशव बहादुर रायमाझी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : परशुराम कुँवर क्षेत्री
प्रधान कार्यलय : थापाथली, काठमाडौं
शाखा : ९१
वेबसाइट : www.janatabank.com.np
स्टक टिकर : जेबिएनएल
बैङ्कको महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू (रू. हजारमा ) :-
बैङ्कको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २०७४/७५ आर्थिक वर्ष र २०७३/७४ आर्थिक वर्षबीच तुलना गर्दा :
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ३ दशमलव ११ प्रतिशतबाट घटेर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा सिमित भएकोे छ । बैङ्कको लगानी रू. ५ अर्ब ७९ करोड २८ लाख रहेको छ ।
बैङ्कले पहिलो त्रैमाससम्ममा रू. ५२ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख निक्षप सङ्कलन गरी रू. ४७ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. ३५ करोड ८४ लाख, कर्मचारी खर्च रू. १५ करोड ९० लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ११ करोड ४९ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ४ करोड ११ लाख रहेको छ ।
स्थिर सम्पत्ती २ सय ७५ प्रतिशतले बढेर रू. ७९ करोड २७ लाख र अन्य सम्पत्ती ८९ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ७५ लाख पुगेको छ ।
बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. १४ करोड ३८ लाख रकम छुट्याएको छ । पूँजी कोष लागत ७ दशमलव ९० प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्तता १५ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार तरलता अनुपात २६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत, प्रति शेयर आम्दानी ३ दशमलव ७१, मूल्य आम्दानी अनुपात ६९ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय २७ दशमलव शून्य ६ रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको करीब २ गुणा छ ।
खरीद चाप : बैङ्कको बुधवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप ८ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ७४ हजार ८ सय ९३ कित्ता शेयर खरीद र ९ हजार १ सय ३० कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
६ सेप्टेम्बर २०१७ ६ डिसेम्बर २०१७
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्कको ५६ दिनको करोबारको अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस आकृतीले शेयर मूल्य बुलिशमा जाने देखाउँछ ।
आरएसआईः बैङ्कको ५६ दिनको करोबारको न्यूट्रल जोन (५९ दशमलव शून्य ५ स्केल)मा छ । शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनामा रहेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसनः बैङ्कको ५६ दिनको करोबारमा २ दशमलव ७८ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः बैङ्कको ५६ दिनको करोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिदैँ गएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा, र २१ दिने मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । हालको मूल्य रू. २ सय ४९ पछि बजारको अवस्था परिवर्तन गरी मूल्य महँगिएमा रू. २ सय ६१ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू. २ सय ४२ मा टेवा पाउन सक्छ ।